पेडिक्योर अर्थात् खुट्टाको सरसफाइ - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
पेडिक्योर अर्थात् खुट्टाको सरसफाइ
चिटिक्क अनुहार, आधुनिक पहिरनमा भएकाहरू पनि जुत्ता, मोजा खोलेपछि प्रायः लाजमर्दो अवस्थामा पुगिरहेका हुन्छन् । घरबाहिर निस्किनुअघि चारचोटि ऐना हेर्नेहरूले आफ्ना खुट्टाको सरसफाइमा भने सामान्य ध्यानसमेत दिएको देखिँदैन ।
शारीरिक सुन्दरतामा खुट्टाको समेत महत्त्वपूर्ण स्थान छ । यसैले भनिन्छ, कुनै व्यक्तिको पहिचान उसको अनुहारभन्दा बढी खुट्टाले दिइरहेका हुन्छन् ।
शरीरका देखिने अंगहरूलाई सफासुग्घर बनाउने प्रयास गरिए पनि महिलाको दाँजोमा पुरुषहरू खुट्टालाई त्यति महत्त्व नदिने वर्गमा पर्छन् । उसो त महिलाहरूले समेत पर्याप्त र सही रूपमा खुट्टाको सरसफाइ गरेको विरलै पाइन्छ ।
‘घर फर्किएपछि नियमित रूपमा साबुनपानीले माडेर खुट्टा धुनुपर्छ,’ धुलिखेल अस्पतालका छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्ण भन्छन्, ‘खुट्टा सफा गर्दा औंलाको कापमा राम्ररी धुन बिर्सनु हुन्न । फोहोर त्यस्तै ठाउँमा बस्छ ।’
खुट्टालाई आकर्षक, स्वस्थ र संक्रमणमुक्त राख्न लोसन, क्रिम वा उपलब्ध कुनै पनि खाने तेलले नियमित मालिस गर्नु लाभदायक हुन्छ । मालिससँगै पेडिक्योर अर्थात् खुट्टाको सरसफाइसमेत आवश्यक रहेको औंल्याउँदै डा. कर्ण भन्छन्, ‘कम्तीमा दुई सातामा एक पटक पेडिक्योर गर्नु खुट्टा स्वास्थ्यको लाभदायक हुन्छ । यसको लागि ब्युटिपार्लर नै जानु आवश्यक छैन, घरमै अझ राम्ररी गर्न सकिन्छ ।’
पेडिक्योर गर्न शरीरले थेग्न सक्ने तातो पानीमा तरल अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र तरल साबुन मिलाउनुपर्छ । अनि त्यसमा खुट्टा डुबाएर धुनुपर्छ । १५ देखि २० मिनेटमा छाला नरम भएपछि कुर्कुच्चा जस्ता भागलाई प्युबिक स्टोन आदिले बिस्तारै रगड्नुपर्छ । यसो गर्दा मृत छाला निस्किएर खुट्टा सफा देखिन्छ । तर छालाको मृत पत्र निकाल्न ढुंगा, इँटाको टुक्रा लगायतका घाउ उत्पन्न गर्न सक्ने कडा वस्तुले रगडनु हँुदैन, नत्र छालामा संक्रमण हुन सक्छ ।
पैताला र नङ सफा गर्न कुनै पुरानो तर संक्रमणमुक्त टुथब्रससमेत उपयोग गर्न सकिन्छ । पैताला, औंला र नङ राम्ररी धोइपखाली गरेपछि सफा कपडाले पुछ्नुपर्छ । खुट्टा सुकेपछि पेट्रोलियम जेली, मोइस्चराइजिङ क्रिम वा खाने तेल लगाएर मालिस गर्नुपर्छ । खुट्टाको नङ भने नेल कटरले मिलाएर काट्नुपर्छ ।
डा. कर्णका अनुसार पेडिक्योर गर्न तातो पानीमा मिसाउने गरिएको तरल अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि नपाइए फिटकिरी, नुन र अलिअलि साबुन मिसाउनुपर्छ ।
कुर्कुच्चा फुट्न नदिन पनि सचेत हुनुपर्छ । त्यसका लागि आधा बाटा मनतातो पानीमा तेल हालेर २० मिनेटसम्म खुट्टा डुबाउनुपर्छ । डा. कर्णका अनुसार, कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या भएकाहरूले दिन बिराएर यो प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदा दुईतीन साताभित्रै त्यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यस्तो गर्दा पनि कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या समाधान नभए, अरू नै रोग लागेको हुन सक्छ । त्यसैले छाला रोग विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ ।
अमेरिकन एकेडमी अफ डर्मेटोलजी (एएडी) को तथ्यपत्र अनुसार, मुख्य रूपमा रिमुभरका माध्यमले नेल पालिस हटाएपछि नङलाई नरम पार्न क्रिम लगाउने गर्नुपर्छ । किनभने, धेरैजसो नेल पालिस रिमुभरमा रसायन हुन्छ, जसले नङलाई कडा बनाउँछ । यस्तै, संक्रमणबाट जोगिन नङमुनिको भाग (क्युटिकल्स) लाई कहिल्यै काट्नु वा भित्र ठेल्ने गर्नु हुन्न । त्यस्तो गर्नैपरे नुहाएपछि बिस्तारैबिस्तारै गर्नुपर्छ ।
खुट्टाको रौं हटाउनुपर्ने भए पेडिक्योरपछि मात्र त्यस्तो गर्न एएडीले सुझाव दिएको छ । पेडिक्योर गर्नुभन्दा २४ घन्टाअघिसम्म खुट्टाको रौं खौरनु वा कुनै उपायले हटाउनु हुँदैन । यसो
नगर्दा पेडिक्योरका कारण संक्रमणको सम्भावना बढ्छ ।
पेडिक्योर घरमा नभई ब्युटिपार्लरमा गर्ने भए अझ बढी सावधानी अत्यावश्यक हुन्छ । एएडीको तथ्यपत्र अनुसार, ब्युटिसियनले एक जनालाई पेडिक्योर गरेपछि अर्कोलाई गर्दा आपmनो हात साबुनपानीले धुनुका साथै यो प्रक्रियामा उपयोग गरिने सबै सामग्री निर्मलीकरण गर्नैपर्छ ।
डा. कर्णका अनुसार, ब्युटिपार्लरमा नियमित रूपमा पेडिक्योर गराउनेहरूले संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन सम्भव भएसम्म यसमा उपयोग गरिने उपकरण आफैंले किनेर राख्ने र त्यसैलाई लिएर पार्लर जानु राम्रो हुन्छ ।
खुट्टालाई माया गरौं
– खुट्टा दिनहुँ साबुनपानीले धुने गरौँ
– जुत्ता लगाउनुभन्दा अघि खुट्टा सुक्खा बनाऔँ
– टाइट जुत्ता लगाऔँ
– सफा मोजा लगाउने गरौँ
– धेरै समयसम्म बसेपछि, केही समय हिँड्ने गरौँ, ताकि खुट्टामा रक्तसञ्चार बढोस्
– उपरखुट्टी लगाउँदा बेलाबेला खुट्टा बदल्ने गरौँ
गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ?
पुरुषले खानै पर्ने ८ खाना